Inona ny microbiota amin'ny tsinay? Torohevitra 3 hanatsarana azy | Bezzia
Toñy Torres | 12/10/2021 20:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nandre momba ny flora-tsinay sy ny maha-zava-dehibe ny fiarovana azy io mba hahasalama anao. Eny, ilay fantatra amin'ny anarana hoe flora amin'ny tsinay, dia ilay antsoina hoe microbiota amin'ny tsinay. Ny dikan'io teny io dia amin'ny ankapobeny fitambarana zavamananaina bitika mivelona amin'ny tsinay.
Ny microbiota tsinay dia voaforona microorganisma an-tapitrisany toa ny bakteria, virus, holatra, ary na dia ny katsentsitra aza. Anisan'ireo asan'ny microbiota ny an'ny mifoka kalsioma sy vy, mamokatra angovo ary miaro antsika tsy hanafika avy amin'ny bakteria sy mikraoba hafa izay mety hanjary patolojia. Ho fanampin'ny fanatanterahana asa maro samihafa amin'ny fampandrosoana ny hery fiarovan'ny vatana.
1 Inona ny microbiota amin'ny tsinay ary ahoana ny fomba famoronana azy
1.1 Ahoana ny fanatsarana ny microbiota
Inona ny microbiota amin'ny tsinay ary ahoana ny fomba famoronana azy
Ny microbiota amin'ny tsinay dia tsy mitovy amin'ny olona tsirairay, singa miavaka izay niforona nandritra ny fiterahana. Ny reny dia mamindra ny karazana zavamiaina bitika rehetra amin'ny fotoana fiterahana, amin'ny alàlan'ny fivaviana sy diky rehefa hiteraka. Na zavamiaina bitika izay eo amin'ny tontolo iainana raha ny amin'ny fanaterana cesarean. Izany hoe, manomboka manomboka amin'ny fotoana nahaterahana ny microbiota.
Saingy, amin'izany fotoana izany dia manomboka ny fizotrany izay handany taona maro vao vita. Mandritra ny 3 taona voalohany amin'ny fiainana dia miovaova ny zavamiaina bitika izay mamorona microbiota tsinay. Ary mandra-pahatongan'ny olon-dehibe dia hitohy io fanamorana sy fanamafisana io, izay hiharatsy sy hihasimba izany rehefa mahatratra ny fahamatorana. Ilaina ny asan'ny microbiota ary noho izany dia tena ilaina tokoa ny manatsara sy miaro azy mandritra ny fiainana.
Ny asan'ny microbiota ho an'ny fahasalaman'ny olombelona dia zava-dehibe, raha ny tena izy, dia raisina ho toy ny taova miasa amin'ny vatana izany. Io fitambaran'ny zavamiaina bitika io dia miasa miaraka amin'ny tsinay sy manatanteraka asa lehibe efatra izy io.
Manamora ny fandevonan-kanina: manampy ny tsinay ho mifoka otrikaina toy ny siramamy, vitamina na asidra matavy tena ilaina, ankoatry ny hafa.
Tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny rafi-pandevonan-kanina: Mandritra ny dingana voalohany amin'ny fahazazana sy amin'ny zazakely, dia mbola malemy ihany ny microbiota ary tsy matotra ny rafi-pandevonan-kanina. Noho izany dia mila mitandrina manokana bakteria afaka miditra ao amin'ny rafitry ny zaza amin'ny alàlan'ny sakafo, rano na fifandraisana amin'ny faritra maloto.
Mamorona sakana fiarovana: mifampitaha amin'ny bakteria hafa mandrahona miaina miaraka amin'ny zavamananaina ao amin'ny vatan'olombelona.
Hamafiso ny fiarovana: manampy ny microbiota tsinay hamafiso ny hery fiarovana, izay miaro antsika amin'ny bakteria sy ny viriosy.
Ahoana ny fanatsarana ny microbiota
Misy fomba maro hanatsarana sy hanamafisana ny microbiota amin'ny tsinay, satria ny famoronana karazana fitaomana ity vondron'olona mikraoba ity, ny fanatsarana ny fahasalamany hahafahan'izy ireo manatanteraka tsara ny asany. Ny fomba fanatsarana flora tsinay es ny totalin'ireto torolàlana manaraka ireto:
sakafo: Ny fihinanana sakafo voajanahary, tsy misy akora manimba izay mety hanimba ny fahasalaman'ny microbiota. Araho, tohizo sakafo isan-karazany, voalanjalanja ary antonony, izay ananan'ireo sakafo voajanahary, no fomba tsara indrindra hitazomana ny fahasalamana amin'ny ambaratonga rehetra.
Probiotika: Izy ireo dia sakafo na fanampin-tsakafo misy zavamiaina bitika velona izay manatsara sy mitazona ny flora-tsinay.
Prebiotika: amin'ity tranga ity dia sakafo misy a fibre avo lenta izay manome otrikaina ho an'ny microbiota amin'ny tsinay.
Ny vatana dia feno zavamiaina bitika velona izay miaina amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, toy ny lela, sofina, vava, fivaviana, hoditra, havokavoka, na lalan-dra. Ireo zavaboary ireo dia misy satria manana anjara asa manokana sy tena ilaina amin'ny tranga tsirairay sy mba hankafizanao ny fahasalamana dia ilaina ny miaro ny bakteria ao amin'ny vatana. Araho ny sakafo manankarena amin'ny voankazo sy legioma, ary koa sakafo misy fibre mety levona, satria izy io dia maniry ny fitomboana sy ny fiasan'ny mikraoba ao amin'ny microbiota amin'ny tsinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Inona ny microbiota amin'ny tsinay? Torohevitra 3 hanatsarana azy